'I-Solo: Ibali leMfazwe yeNkanyezi' Ibhokisi yeOfisi kunye noHlahlo-lwabiwo mali: I-Lucasfilm ayinasiphako? - Iimuvi
Eyona Iimuvi Esona sizathu 'Solo: Ibali leMfazwe yeNkwenkwezi' aluphumelelanga ukuqhuma kwiOfisi yeBhokisi
Esona sizathu 'Solo: Ibali leMfazwe yeNkwenkwezi' aluphumelelanga ukuqhuma kwiOfisi yeBhokisi
UAlden Ehrenreich nguHan Solo kwi 'Solo: Ibali leMfazwe yeNkwenkwezi.'Ifayile yeLucasfilm
Andizukuhlukanisa iinwele kwaye ndizame ukukuqinisekisa ngenye indlela: iDisney kunye neLucasfilm Solo: Ibali leMfazwe yeNkwenkwezi Ndiphoxekile kwi-ofisi yebhokisi kwimpelaveki yayo yokuvula. Kakubi.
Umboniso bhanyabhanya-obize ubuncinci be-250 yezigidi zeedola ngenxa yoqhakamshelwano olukhulu, hayi ukubala iindleko ezinkulu zokuthengisa- uvulelwe i-103 yezigidi nje kuphela ngeempelaveki zasekhaya zeentsuku ezine kwaye umi kwi-168 yezigidi zeedola kwihlabathi liphela njengalo mbhalo (bekulandela umkhondo kuvulwa phakathi $ 130 yezigidi kunye ne-150 yezigidi zeedola ). Kule nqanaba, ifilimu iya kulwela ukuwela i-450 yezigidi zeedola kwihlabathi liphela kwaye iqinisekisiwe ukuba iphele ngokubaleka njengeyona isezantsi-ingeniso Idabi leenkwenkwezi Ifilimu yexesha leDisney.
Ukucacisa uMlawuli, Kuphela nje yayingasebenzi ngokupheleleyo.
Kunzima ukubiza i-100 yezigidi zeedola kwiSikhumbuzo seveki 'ukungaphumeleli,' kodwa kunamandla Idabi leenkwenkwezi I-brand ibanjwe kumgangatho ophezulu kunoninzi, njengenye yeempawu zokuqala kwimbali ye-cinematic, uPaul Dergarabedian, umhlalutyi osasazo omkhulu kwi-comScore, uxelele uMbonisi. Impelaveki yokhuphiswano olukhulu lweSikhumbuzo evelise imali eyi- $ 225 yezigidi, ayizange inike Kuphela ikhefu elininzi, kwaye nge I-Deadpool 2 kwaye Imfazwe engapheliyo Ukuleqa abaphulaphuli abafanayo, kwakunzima ukuba ifilimu iphile ngokuqikelela kwangoko. Kuza nje iinyanga ezintlanu emva IJedi yokugqibela , abalandeli abaqhelekileyo banokuba banele Idabi leenkwenkwezi ubuncinci kwixesha elifutshane, kodwa ngokukodwa kwi-comScore / Screen Injini yePostTrak yophando lwabaphulaphuli, abo bayibonayo ifilimu bayithanda ngokunika iinkwenkwezi ezi-4 kwezi-5… kwaye oko kungaba ziindaba ezimnandi zefilimu eziya phambili.
Oku kuphawula ukungahambi kakuhle kwemali iDisney eqokelele kumnyele okude, kude kakhulu kuba ikhuphe i-4 yezigidigidi zeedola kuLucasfilm emva ko-2012 ( Izabelo zeDisney ziye zawa Ukulandela Kuphela 'Kuvuliwe kuthulisiwe). Kodwa ungakhathazeki, Idabi leenkwenkwezi uphawu alukho nakweyiphi na ingxaki yokwenyani.
Ukunyanzelwa Idabi leenkwenkwezi Ukudinwa
Iqaqobana labahlalutyi beebhokisi zeofisi ziye zaqaqambisa Kuphela ’Ukukhululwa emva nje kweenyanga ezintlanu ukwahlulahlula IJedi yokugqibela njenge-scapegoat yokusilela kwayo ukumisela ibhokisi yeofisi kwi-hyperspace. Kodwa oko akuhambelani neendlela zakutshanje ze-blockbuster.
Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo wafika nje emva kweenyanga ezimbini I-Panther emnyama , ezibetha iithiyetha kwiinyanga nje ezimbini emva koko UTr: Ragnarok . Ukulandela okuzayo Imbovane-Man kunye noNomeva , UMarvel uya kukhupha izihloko ezintandathu kwiinyanga ezili-14 kwaye ayisiyiyo kuphela abayinqumlayo. UHarry Potter kunye neeHallows zokuBulala-Icandelo I kuvulwe nje iinyanga ezisixhenxe ngaphambi kwesahluko sokuqukumbela; IQela lokuzibulala wafika emva kweenyanga ezintlanu Batman v Superman: Ukuqala koBulungisa .
Yintoni efana ngazo zonke ezi bhanyabhanya? Bonke benza izixa zokungahloneli Thixo ngokubanzi.
Umzekelo ngamnye (kunye nabanye abaninzi abadweliswanga apha) bakwazile ukutsala abalandeli abomeleleyo, kunye nabaphulaphuli ngokubanzi kunye nabadlali beemovie abaqhelekileyo. Isibheno seCrossover esifana nokuzalwa ngaphandle kwenani lezinto, ikakhulu ukubhuza kunye nokufikeleleka, okuthi Kuphela kubonakala ngathi akukho.
Abalandeli abangenayo i-hardcore babengalumi kwi-angle yonke ye-Han Solo Origin Story, i-gripe ezininzi Idabi leenkwenkwezi Abathandi nabo babelana. Abo balandela ishishini banokucinywa, okanye ubuncinci bachaphazeleke, ngomdlalo opapashwe kakhulu ngasemva kwemiboniso. Umongameli kaLucasfilm uKathleen Kennedy uqokelele abalawuli boqobo uPhil Lord kunye noChris Miller phakathi kwimveliso kwaye waqesha uRon Howard ukuphinda adubule malunga neepesenti ezingama-70 zefilimu. Ngelixa uphononongo lwefilimu lwalungcono kunokuba bekulindelwe, uthando lwe Kuphela yayiseludidi ngokubanzi (iipesenti ezingama-70 kwiitamatisi ezibolileyo).
Ibali elifutshane: Ngaba uLucasfilm wenze ungeniso olukhethekileyo kwi Idabi leenkwenkwezi I-canon abagxeki abanomdla kunye nabalandeli abahendayo, ngekhe ibaluleke nge-ounce enye ye-coaxium hyperfuel Idabi leenkwenkwezi Umboniso bhanyabhanya uphume kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
Kuphela yeyokuqala yexesha leDisney Idabi leenkwenkwezi Iiflick zokuba nesibindi kwi-ofisi yebhokisi yehlobo, kwaye ngoku inokuba yeyokugqibela. Ngasinye isitudiyo sangaphambili esikhutshiweyo sesithathu safika kwimidlalo yeqonga ngoDisemba kwaye salawula ibhokisi yebhokisi yeKrisimesi ukuba ibe yeyona bhanyabhanya inkulu kwiminyaka yabo. Umkhosi uyavusa ($ 2.06 yezigidigidi), Inamandla enye ($ 1.05 yezigidigidi) kunye IJedi yokugqibela (I-1.32 yezigidigidi zeedola) sele ibuyisele inzuzo kwiDisney kwaye ngaphambi kokuba siphendule iibhiliyoni kwintengiso.
Impelaveki yeSuku lweSikhumbuzo kutshanje iye yaziwa ngokungabikho kwemilenze kwiofisi yebhokisi, kwaye iDisney ibivile ubunzima bokwehla kule minyaka idlulileyo. Lo ngunyaka wesine ngokulandelelana apho iMouse House isungule umboniso bhanyabhanya obiza kakhulu ( Ngomso Mhlaba , UAlice ngeGlasi yokuKhangela , AmaPirati aseCaribbean: Abantu abafileyo abaxeleli mabali ) kule mpelaveki kwiimbuyekezo ezidanisayo. Nangona imeko inokuthi ifike kumanqam ngokukhutshwa konyaka ozayo Aladdin , mhlawumbi iDisney ngekunconywe ngcono ukuba ibambelele kummandla wasebusika.
Kuphela Akuzange kwenziwe nzuzo kuvulwa emva kweveki enye I-Deadpool 2 ($ 55 yezigidi ngexesha leholide) kwaye nangoku uvukile Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo ($ 20 yezigidi). Ngelixa iifayile ze Idabi leenkwenkwezi i-anthology inokubamba ngcono kunokuba bekulindelwe kwiintsuku ezizayo, iya kujongana nokhuphiswano olunzima ngokuchasene nayo Ulwandle lwesi-8 (Juni 8) kunye Iimpawu ezimangalisayo 2 (Juni 15).
Alikho nje igumbi elinokuphefumla kweli hlobo le-blockbuster lifakwe ehlobo.
Ithetha ntoni iLucasfilm yokuya phambili?
Ngokunyaniseka, mhlawumbi akukho nto.
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Isiqendu IX izakufika kwiithiyetha ngoDisemba 2019 kwaye konke kuqinisekisiwe ukuba kuvulekele ubuncinci i-200 yezigidi kunye ne-1 yezigidigidi zeedola kwihlabathi liphela ubuncinci. Nangona kungekho enye Idabi leenkwenkwezi Ukukhutshwa kubhengezwe ngokusesikweni ngaphaya koko, siyayazi loo nto Logan Umbhali / umlawuli uJames Mangold usebenza kwi Boba Fat spinoff kwaye u-Ewan McGregor uya kubuya kwi UObi-Wan Kenobi ulonwabo oluzimeleyo.
Siyazi nathi IJedi yokugqibela Umbhali / umlawuli uRian Johnson une-trilogy entsha eyahlukileyo kwimisebenzi, ngelixa Imidlalo yeethrone Ababonisi D.B. U-Weiss noDavid Benioff basebenza kuthotho olutsha lweefilimu ngokunjalo, singasathethi ke ngesenzo sikaJon Favreau somdlalo kamabonwakude osetyenziswayo ukubetha umsasazi weDisney kunyaka olandelayo. Ngelixa zonke ezi zicwangciso Umngcipheko wokunweba uLucasfilm ubhityile kakhulu , Abayi kutshintshwa ngokuphawulekayo ngu Kuphela 'S yokusebenza.
I-Disney ayiyi kuyeka ngokukhawuleza ukwenza Idabi leenkwenkwezi iiprojekthi okanye zikhuphe enye kuphela kwiminyaka embalwa ngenxa yokuba enye yeemovie zabo zokuqala zikhubekile. Ngelixa kukho izifundo esinokufunda kuzo Kuphela -Abaphulaphuli banqwenela ukwahluka okungakumbi kwii-blockbusters zabo, ihlobo yindawo yokudlala enabantu abaninzi, kwaye abanye oonobumba abalungelanga kwaphela ii-prequels kunye namabali emvelaphi-awuyi kubona naziphi na iintloko ziqengqeleka estudiyo.
Ukuphefumla nzulu, hlala uzolile kwaye, ukuboleka kwi-NBA, Thembela iNkqubo.
I-CBD yeeNja- yeyona oyile ye-CBD ilungele izinja yase-UK (2021)
Yeyiphi iTekhnoloji Ngaba uJulian Assange ayisebenzisileyo kwiNdlu yoZakuzo yase-Ecuador ukuya kwi-imeyile yakhe ye-imeyile ye-DNC?
Unyulo olusemthethweni lwe-NYC olusebenzayo kwi-Callor ka-Sodolophu yokuba ashiye isikhundla sakhe kumabango obuqhetseba
Usuku kubomi boMlawuli weCasting: Inkampani yeTelsey + Thatha indawo yeTV yeNew York
Igunya lezibuko leyork entsha kunye nekhomishina yejezi entsha caren z. kujikwe
izongezo zokukhawulezisa imetabolism
Iimfazwe zeenkwenkwezi kwi-movie endala yeRiphabhlikhi
kutheni burt reynolds wasweleka
ukutya okucinezelayo okusebenza ngokwenene
Ukujonga ngokupheleleyo imvelaphi yolwaphulo-mthetho